Heshiiska Carabta Iyo Israel Ma Dhalin Karaa Tartan Hub Urursi Ah? – Borama News Network
Laakiin “moorada nabaddu” waa siduu u dhigay ra’isal wasaaraha Israel e, waxay qarisay dhacdooyin kale oo waaweyn.
Arin kale oo beryahan ba socotay waa in dalal badani hub cusub iibsanayeen.
Dalka ugu horeeyey ee wadama Khaliijka ee xidhiidhka la yeesha Israel, waa Imaaraadka Carabta e, ayaa qarka u saaran inuu Maraykanka ka iibsado diyaarado aad loo jecel yahay oo kuwa dagaalk ah.
Israel oo iyadu ahba dalka leh cududda milatari ee ugu horumarsan gobolka, ayaa iyadana laga filayaa in ay hub culus hesho.
Maraykanku wuxuu u arkaa in hubka ay dalalkaasi ka iibsanayaan uu awood dheeraad ah siin doono dalalkaa ay xulafada yihiin ay kaga xoog roonaaadaan Iran oo Maraykanku u arko in ay ay halis ku tahay dunida oo uu damacsanyahay inuu go’doomiyo.
Arintu waa ‘qab’
Diyaaradaha dagaalka ee F-35 Lightingin II ee ay samayso shirkadda Maraykan ka ah ee Lockheed Martin, waa diyaaradaha dagaal ee ugu casrisan dunida waxaanu Jason Bronk oo ka tirsan mac-hadka Royal United Services Institue ee Ingririisku ku tilmaamay “mar la arag”.
Imaaraadku muddo dheer ayuu daba socday inuu helo, waxaana la sheegaa in ay lix sannadood gaadhayso inta uu ka codsanayey Washington in ay u ogolaato in laga iibiyo diyaaradaas oo uu noqdo dalkii u horeeyey ee Carbeed ee diyaaradahaa yeesha.
Jason Bronk wuxuu sheegay in diyaaradahaas F-35 ay Imaaraadka uga dhigan yihiin “qab qaranimo.”
Khamiistii ayaa warbaahinta Maraykanku ku warantahay in maamulka Trump si aan toos ahayn ugu wargeliyey Congress-ka inuu qorshaynayo in laga iibiyo 50 diyaaradahaa dagaalka ah dalka Imaaraadka oo laga siin doono 10.4 bilyan oo doolar.
Arintaasi waxay Imaaraadka u tahay tallaabo loo qaaday dhanka wax uu muddo dheer doonayey maadaama oo sannado badan isku dayo uu ku doonayey inuu iibsado diyaaradahaas hase yeeshee ay suurto geli wayday.
Wararkii Ugu Dambeeyay Ee Doorahada Dalka Maraykanka Iyo Xaalada Amni Ee Faransiis Oo Faraha Ka Baxday
Ergayga Qaramada Midoobay U Qaabilsan Somaliya Oo Kulan La Qaatay Koomishanka Doorashooyinka Somaliland
Xildhibaan Ibraahin Xuseen Oo Eedaymo Xoogan U Jeediyay Xildhibaan Laabsaalax
Bnnstaff Bnnstaff February 18, 2022
Dawladda Soomaliya oo Sheegtay in la Diyaariyay Sharciga Hanaanka Faderaalka